Ny DAG001 dia basy fampiharana ambany fidina 1 ho an'ny vokatra azo tsiranoka sy mametaka, hamoahana sy hampiharana vokatra 1-singa. Misy karazana adaptatera sy vazivazy fantsom-panafody / famafazana azo atao mifanaraka amin'ny filan'ny fampiharana anao.
Ny basy dia, arakaraka ny fikoriananao, ny làlan'ny vokatra samihafa ary mahazaka tsindry faran'izay mahery 400 bar. Ny ampahany amin'ilay basy izay mifandray amin'ny vokatra dia vy vy, ny fanjaitra dia mifono DLC ary ny tombo-kase vokatra dia PTFE. Misy ihany koa ny mety hanampiana bira fanafanana ny basy.
Noho ny fanaraha-maso ny pnatique ny fanjaitra, ny fotoana hamaliana haingana dia azo hahazoana antoka fa marina sy araka ny marina ilay tifitra.